Volkswagen Transporter T5 - imoto ukuthi ungumlandeli evenini njengoba Käfer, zikhishwa phambi ukukhathalela okufanayo. Lokhu mini-ibhasi sekuthandwa kakhulu ngenxa izici zayo kanye Ukucaciswa, ukuze nibaluleke ukutshela.
Volkswagen Transporter T5 iphrojekthi wayezelwe indoda okuthiwa Ben Pon. Ngo-1947, wabona platform imoto, elakhiwa abasebenzi "Volkswagen 'esekelwe' Beetle". Umngenisi wanquma ukuthi kuyoba mnandi ukwakha imoto nezinto zokuhamba of imithwalo amancane, uma sicabangela ukuthi izimoto ezifana zithandwe. Ngokuvamile, futhi umbono wazalelwa ukwakha imoto "Volkswagen Transporter". Futhi-ke, lapho ukukhiqizwa kwathini yaqala ukubonakala onobuhle ezahlukene.
Le modeli akayekethisi. Kuyinto kokubili ukhululekile futhi ezingokoqobo. Futhi isimiso abakhiqizi - ukudala Volkswagen Transporter T5 ezinjalo, ukulayisha ke njalo yawela phezu amabhuloho nombala, kungakhathaliseki ukuthi imoto ukulayishwa, ingxenye noma ngokuphelele.
Le nguqulo eshibhe
Kakhulu "olandelanayo" inguqulo yalesi imodeli kubhekwa Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI LWB L2H1. Manje lokhu imoto isesimweni esihle, angathengwa emhlabeni isigamu sesigidi sama-ruble. Lo mshini amathuba sasivumela ezibanzi. Amamodeli ihambisane kokubili amabili cab olulodwa. Zonke izinguqulo nethuba lokukhetha uhlobo platform. Ngokwesibonelo, "Pick-up" hlangothi nakuloluya overhangs anemisila isiqhebezo okulula evulekile, eyenza umuntu angaxhumana yesikhulumi ezinhlangothini ezintathu. Itende Uhlaka etholakalayo njengoba imishini ozikhethela. Inguqulo nge cab double Kulula ukubeka umuntu eziyisithupha.
Injini 84 efakwe amahhashi, 1.9 litre, nge ngesivinini esiphezulu 133 km / h. ngu phansi ukusetshenziswa imayelana eziyishumi amalitha. Ngokuvamile, izimfanelo ukuntula nesizotha, eziyisisekelo, kodwa abaningi, futhi enjalo.
Iloli ezinamandla kakhulu
Imoto entsha waba umlandeli Volkswagen Transporter TDI T5. Lokhu kukhetha kungaba ozibongayo Ukucaciswa enamandla kakhulu. Ngaphansi yayo hood 235 amahhashi efakwe 3.2-litre V6 injini, okuyinto enza umshini 182 km / h. Mark 100 km / h ongafinyelela iveni ngenxa 10.7 imizuzwana. I engavamile walesi evenini kuyinto fuel injection, kanye gearbox six-speed. Front ukumiswa ezimele (McPherson), nengxenye yalo engemuva ifakwe mfutho telescopic ukushaqeka futhi isiphethu ikhoyili. Ngokuvamile, kuba - imoto enamandla fast kakhulu, okuyinto abantu abaningi isibe umsizi yangempela zokuthutha kanye nohambo.
Van T5 2.5 TDI 4motion Swb L1H2
Lena ehluke ngokuphelele Volkswagen Transporter T5. Isici liphinde ezahlukene njengoba luwuhlobo umgibeli. Futhi imishini sasivumela ocebile. imishini yayo ejwayelekile inama uhlelo yezokuphepha ezinhle (airbag zifakwa ngoba umshayeli nabagibeli). Ngaphezu kwalokho, imoto ifakwe ABS kanye MSR izinhlelo. Futhi lokhu imoto ukumiswa ezimele futhi ngcono, chassis ovikelekile nge ukudluliswa yokuqala, ngenxa okuyinto imodeli imzuzele handling kakhulu.
Ngakho, ngokuphathelene nezici lobuchwepheshe, kuba evenini 4 ngendlu nge-amahhashi 131, turbocharged. Okokhelekayo supply system lapha - udizili umjovo oqondile. inketho ukonga kakhulu futhi wenze nenzuzo. Isebenza motor ukugijima 6-speed Mechanics. Evenini ngesivinini esiphezulu kuyinto 160 km / h, kanti uphawu 100 km umshini wokubonisa izinga lejubane kuphakamisa umcibisholo ukuze 16.4 imizuzwana. Enye inzuzo - umoya disc amabhuleki. Futhi umbhede ukhululekile. Lesi sakamuva kubaluleke ngokukhethekile.
Volkswagen Transporter T5 impendulo wathola ubumuhle kakhulu ngenxa elingaphakathi yayo ukhululekile. Ngenxa umshayeli njengoba umgibeli, kuyilapho lithwalwa emotweni. Ukhululekile esihlalweni ezithambile ehlezi kahle, semali isikhala imilenze phezu kwekhanda lakhe, indawo emnandi - konke ukunakwa la umnikazi uphawu lokhu evenini. Nokho, lokhu akukhona version ethandwa kakhulu. On the adumile ngaphezulu "Volkswagen" kufanele usitshele kabanzi.
Le nguqulo zikanokusho kakhulu imoto kubhekwa Volkswagen Transporter T5 Multivan Business. Ekhaya eJalimane, imoto kuwufanele mayelana 120,000 euro. imishini yakhe ejwayelekile inama bi Xenon izibani, GPS navigation, othomathikhi ekulawuleni isimo sezulu, kagesi iminyango beya, isiqandisi, itafula futhi ezihlukahlukene zokuzijabulisa izinhlelo. Ngokuvamile - konke okudingayo ukuze induduzo yangempela.
Kusukela maphakathi nawo-2007, e ukukhanya akube kusakhulunywa ngaye wheelbase multiven eside, ingxenye 5.29 m. Futhi ngo-2010, imodeli is olwesimanje ngokuphelele. Kwanqunywa ukuba ushintshe imishini ukukhanyisa, uguqule futhi uthuthukise hood ingaphakathi. Ngamanye amabhampa steel, fenders angaphambili, futhi ohlangothini izibuko eshintshile Izinsimbi. Plus esishintshile gamma izinjini. Kasibili zonke izinjini ukukhanya ayatholakala volume of 2.5 noma 2 amalitha. Kukhona zombili diesel likaphethiloli ezahlukeneyo. Isibalo "amahhashi" zihlukile - kukhona version qinile kukhona buthaka. Ngokokuqala ngqá ngo-amancane kwadingeka isimiso esinjalo, njengoba biturbo. Ngokuvamile, i-sesimanje ube yimpumelelo kakhulu. Imoto wakwazi ukuthuthukisa kangangokuthi iba omele okhazimulayo ubunikazi entsha ezinkampani we ukukhathazeka.
Four-chassis kusukela VW
A amazwi ambalwa Ngifuna ukutshela indaba le nguqulo "Volkswagen". Le modeli Unomzimba ovikelekile, isimo phambi fascia kanye bumper namandla ngempela futhi omkhulu. Futhi lubonakale yokukhanya entsha kanye namasondo. Ngaphezu zonke onjiniyela kabusha ngokuphelele gumbi elingaphakathi, okwenza kube mnandi futhi ezikhangayo.
Ububanzi amasha futhi inama ngcono kakhulu imingcele yokusebenza isisindo encishisiwe. Lokhu kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi izimoto, okuyinto kakade esikhulu. isisindo salo amathani 2.6 (okungenani). isisindo Maximum izimpahla ezingamathani angu-3.2. Plus, lokhu ukungeza amandla, okulingana lungene amathani 1.4. imoto Ubude likhona izinguqulo 67 ezahlukene. Futhi uma acabangele ongakhetha ahlukahlukene ke kukhona abangamakhulu amaningana! Njengomuntu owaziwayo ofaka umxhwele. Custom amancane ifakwe ezine-wheel drive kanye ezimbili ezicwebezelisiwe esinanyathiselwe iminyango labaqaphi elingemuva. Zikhona ongakhetha nokukodwa ukusonga. Lapha kubalulekile ukuze ungeze ama-wiper, izibani Halogen entsha, amawindi asebenza ngogesi, izibuko evuthayo, amasondo ayo futhi ezengeziwe umgibeli esihlalweni efakwe phambi. Lokhu nokunye okuningi ungaphakathi izinqola, wenza oda. Abantu abaningi bawathenga ongakhetha ezifana "Folksvagen" kwenza ezinhle ngempela mini-amabhasi.
Bambalwa abantu bazi ukuthi Volkswagen Transporter wavela kaningi kumabhayisikobho futhi opopayi. "MythBusters," "Izimoto," "Futurama," "Scooby Doo" (van edume kakhulu), "Ukugibela Bullet," "Emuva Ikusasa," "Lost" (ihlelo TV series), "Night idiots Ukuphila "" Angels Namadimoni "ngisho isiqophi Ich ngeke ethandwa band" Rammstein "- lezi kanye nezinye eziningi isiqophi uchungechunge kwachazwa imoto. Abagxeki abaningi basikisela ukuthi lidlale indima ebalulekile okwandisa ukuthandwa kulo mshini.
By endleleni, kukhona omunye umqondo imoto, okuyinto evame esetshenziswa imodeli "transformer". Futhi lokho Volkswagen Microbus Concept. It yakhelwe style Retro futhi ngempela into efana "Transporter". Kukhona onobuhle ambalwa avame kudidaniswe "Volkswagen": Volkswagen LT, Volkswagen EA489 ( Hormiga) kanye Volkswagen Crafter. Kodwa eqinisweni kuba imoto ezahlukene ngokuphelele.
Akhuluma ngokuzokwenzeka Volkswagen Transporter T5, kufanele kuphawulwe imodeli ukunakwa 2.0 BiTDI 4motion Double Cab L2. Kuyinto esiseduzane "isihlobo" T5, eye zithandwa kakhulu. Yena, njengawo esasisandulele, itholakala izitayela umzimba ezine ezihlukene. Eyokuqala - i enqoleni zonke-metal. Eyesibili senzelwe abagibeli. Umzimba lwesithathu inama chassis ne cab double noma olulodwa, futhi inguqulo yakamuva - Pick-up.
Ngokungafani ezazingaphambi kwayo, le evenini isibe uyazikhulumela. Uma sikhuluma izinguquko zangaphandle, zingabantu ikakhulu phambi Izinsimbi, phambi bumper futhi yokukhanya. The elingaphakathi is kwesokunxele cishe wonke esifana-T4. Waguqulwa ukuma kudeshibhodi izibani uvele mhlophe futhi isikali chromium edging. Futhi onjiniyela abazenzile ukuze sibonise ngesivinini kunconyiwe ku iphaneli. Lokhu Volkswagen Transporter T5 Ukucaciswa kuyinto enhle kakhulu - konke iyahlangabezana nezidingo yesimanje yemishini alesi sigaba. Ngakho-ke, akumangalisi ukuthi imoto kwaduma.
Le moto fanele, njengazo zonke izimoto isiJalimane, bahlukaniswe njengoba okunokwethenjelwa. Kulesi inqubo, njengoba ukulungisa, Volkswagen Transporter T5 ayidingi, ngoba - ngokuqinile ababebuthene umshini. It uyakwazi kuhlale isikhathi eside. By endleleni, lokhu model kubuye ephephile - ngoba abahamba ngezinyawo, izingane kanye abagibeli. Kwatholakala embhalweni Euro NCAP. Airbag, ezahlukene izinhlelo (anti-lock, traction futhi t.) Futhi-ke, eliphezulu izimpahla ezisetshenziselwa inqubo inhlangano ukukhiqizwa imishini. Konke lokhu kungenxa ngalesi "Volkswagen". Ngenxa yokuthi yena namuhla kuthandwa kakhulu, futhi akumangalisi lokhu. Uma sikhuluma evenini ethandwa kakhulu emhlabeni - nakanjani ube "Volkswagen" German. abanikazi izigidi emhlabeni wonke - hle bonakaliso of ukuthi.
Interior kukhanyisa silungisa ngezandla zabo
Wokucwebezelisa isiphephelo somoya ngokwakho
Isitayela Mediterranean emaqaqasini efulethini idolobha
Winlogon.exe: kuyini nokuthi yini kudliwa
Umqondisi American Endi Vachovski: Biography, nobuciko kanye nempilo yakho
Chain izitolo "Lokuphila", Novosibirsk: Ikheli ububanzi